को iPhone55s फरक छ? मुख्य मतभेद र विशेषताहरु
स्मार्टफोन निर्माता अक्सर फोन को नै मोडेल को धेरै संस्करण जारी। कहिलेकाहीं मतभेद स्मृति या CPU, र अन्य परिवर्तन को राशि परिवर्तन समावेश "भराई।" विशेष गरी म विचार कम्पनी एप्पल मन परायो। अब प्रत्येक एकाइ केही मतभेद आफ्नो जुम्ल्याहा भाइ जारी गरेको छ।
विकल्पहरू आईफोन 5s र 5c
बक्समा समावेश दुवै खरीदार उपकरण नै तस्वीर लगािन्छ। कन्फिगरेसन को मामला मा आईफोन55s धेरै फरक छैन। वितरण सेट एक स्वामित्व हेडसेट, USB-केबल, पुस्तिका, चार्जर, क्लिप र स्टिकर समावेश छ।
तपाईँको मेसिन अझै वर्तमान स्थापना भिन्नता। सेट 5s निर्देशन र क्लिप एक खाम मा पैक मा नै आपूर्ति र बिल्कुल समान बक्से बावजुद।
पनि नाङ्गो आँखा संग बाह्य देखि आईफोन55s भिन्नता निर्धारण गर्न एकदम सजिलो छ। परिवर्तनहरू गृह बटन, यन्त्र मोटाइ र आवास को सामाग्री थिए। उत्तरार्द्ध विशेष सजिलै देखिने सुविधा छ।
5s मोडेल यसको समकक्ष भन्दा अलिकति पतली गरियो। यसलाई जो देखि स्मार्टफोन गरे सामाग्री प्रभावित भएको थियो। सामान्य पाँचौं संस्करण प्लास्टिक बनेको छ, र सुधार 5s बनेको छ anodized एल्यूमीनियम। मोटाई एस संस्करण किन सट्टा 7.6 मिमि यसको कम विकसित एनालग जस्तै 8.97 मिमी छ भन्ने छ।
आईफोन5र 5s विभिन्न आयाम चाहे बारेमा प्रश्न सोध्न, प्रयोगकर्ता आफ्नो पहिचान को सन्तुष्ट छ। दुवै एकाइहरु anodized एल्यूमीनियम बनेको छन्। फरक जब उपकरण काम एकदम noticeably छ रूपमा धेरै 20 ग्राम, छ, 132 - वजन मोडेल 5s र5मात्र 112 ग्राम, र पाँचौ को हल्का छ।
परिवर्तन गरियो र रंग उपकरणहरू। को उपसर्ग संग धातु उपकरण चाँदी, गाढा खैरो र पनि सुनको टोन मा उत्पादन s। को «सी» थप बजेट संस्करण पनि अधिक रंग प्राप्त गरेको छ। अब समतल मा तपाईं नीलो सेतो, हरियो र पहेँलो आईफोन हेर्न सक्नुहुन्छ। एक पाँचौं आईफोन, उपसर्गको बिना केवल सेतो र कालो संस्करण मा आउँछ।
बाह्य तत्व आफ्नो स्थान परिवर्तन भएको छैन। मात्र परिवर्तन गृह बटन आए। को 5s त्यो भूमिका खेल्छ एक बायोमेट्रिक लक। यो एकदम तेस्रो-पक्ष पहुँच बाट उपकरण को एक उन्नत संस्करण को सुरक्षा वृद्धि।
सुरक्षा - ठ्याक्कै फरक आईफोनहरु 5, 5c र 5s। औंठाछाप मात्र महंगा मोडेल एस मा उपस्थित
म्याट्रिक्स परिवर्तन भइरहेको र 8 मेगापिक्सेलको छ छैन। तर, चित्र गुणस्तर - यो आईफोन5भन्दा सुविधाहरू एक 5s फरक छ। उन्नत संस्करण डायफ्राम 2.2 devaysa। यो निकै धेरै 33 को रूपमा प्रतिशतले प्रकाश गर्न क्यामरा संवेदनशीलता वृद्धि।
थप सुविधाहरू पनि परिवर्तन भइरहेको छ। फोन 5s एकदम अनुहार पहिचान सुधार, अब रूपमा 10 मान्छे धेरै स्मार्टफोन ट्रयाक गर्न सक्षम छ। केही फिल्टर थपियो, स्वतकेन्द्रित समायोजन गर्नुहोस्। साथै, थियो जो प्रारम्भिक प्रकाशनमा छैन रेकर्डिङ, समन्वय गर्ने अवसर।
भिडियो खिच्न - यो आईफोन5भन्दा थप एक सुविधा 5s फरक छ। precursor रूपमा सुधार उपकरण द्वारा 1080 पिक्सेल 1920 को एक संकल्प संग रोलर्स हटाउँदछ। तर, नवीनता ओप्टिकल stabilizer निकै भिडियोको गुणस्तर सुधार जो, थपिएको थियो।
Frontalka उपकरणहरू प्रत्येक प्राप्त 1.2 मेगापिक्सेल म्याट्रिक्स। अगाडि क्यामेरा आत्म-पोट्रेट सिद्ध छ। Frontalka पनि सक्षम 720 पिक्सेल को एक संकल्प भिडियो रेकर्ड गर्न।
प्रदर्शन विशेषताहरु केहि आईफोन55s फरक फेला। रेटिना स्क्रिनमा दुवै devaysa काम, अघिल्लो मोडेल मा सिद्ध। प्रदर्शन उपकरणहरू नै संकल्प 1136 x 640 पिक्सेल संग4इन्च छ। रूपमा आईफोन5र 5s आईपीएस-म्याट्रिक्स लागू मा।
धेरै राम्रो हुन देखाइएको मोडेल प्रत्येक प्रदर्शन। प्रयोगकर्ता एक फिक्का सूर्य स्क्रीन वा विकृत चित्र सामना छैन। निर्माता बस राम्ररी सन्तुलित प्रदर्शन मा परिवर्तन गर्न केही छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हार्डवेयर मा के आईफोन55s फरक छ, छ। पहिले, प्रयोग कम्पनी बलियो-A6। क्रिस्टल प्रयोग गरिएको छ बजेट-5c मा, तर पनि सामान्य55s मोडेल मात्र एक नाटकीय परिवर्तन भइरहेको छ। स्मार्टफोन निर्माता नयाँ A7 सुसज्जित छ।
सीपीयू परिवर्तन आफ्नो predecessors को प्रदर्शन दुई पटक 5s गरे। सबैभन्दा रोचक कुरा कि परिवर्तनहरू ऊर्जा खपत वृद्धि छैन छ। साथै, यो र सह-प्रोसेसर सानो कार्यहरु लागि जिम्मेवार छ र मुख्य offloads जो स्थापित गरिएको छ।
5 र 5s दुई कोर मा आफ्नो हात पायो रूपमा। तिनीहरूलाई प्रत्येक को प्रदर्शन 1.3 GHz छ। तर प्रोसेसर को प्रतिस्थापन प्रदर्शन को मामला मा एक मजबूत नेतृत्व मा 5s ल्याए।
सबै मोडेल पाँचौ iOS7तर अन्तर्गत सञ्चालन, मानक5को मालिक को निर्देशन, तपाईं मंच अद्यावधिक गर्न हुन सक्छ। महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रणाली देखा पर्यो छन्। प्रशोधन स्टाफ उपकरण अनावश्यक आवेदन हटाइयो। OpenGL ES 3.0 दृश्य प्रभाव थपेर एकदम सुधार भएको छ।
अद्यावधिक पनि इन्टरफेस प्रभावित। बटन चित्रकला परिवर्तन र खोल थप तीव्र र रमाइलो भएको छ। जोडी र स्वचालित यन्त्र संग काम सुविधा, साना कार्यहरू को कार्यान्वयन।
दुवै मोडेल प्ले अडियो समान छ। फोन तीन माइक्रोफोन प्रत्येक पायो। प्राथमिक र प्राथमिक वक्ता चर्को र गुणस्तर।
प्रत्येक मोडेल मा एक निर्मित ब्याट्री छ, तर क्षमता markedly फरक छ। मात्र 1440 mAh - यो 5s ब्याट्री को 1570 mAh, र यसको पूर्ववर्ती मा स्थापित छ। काम को अवधि पनि एक मानक उपकरण को पक्षमा markedly, र अलग छ।
ब्याट्री को उन्नत संस्करण एक सानो प्रयास भए तापनि, तर यो एकदम विशेषताहरु सुधार भएको छ। मात्र 225 घण्टा - अचम्मको कुरा, यो स्ट्यान्डबाइ एकाइ मा एक शक्तिशाली प्रोसेसर संग 5s 250 घण्टा सुत्छन् र5ayfon।
को 5s मा पनि markedly सामान्य पाँच भन्दा बढी छ। भाषण मोडमा उपकरण विस्तारित घण्टा 10 "बस्नेछन्।" मानक उपकरण संग स्मार्टफोन मात्र 8 घण्टा दावा।
केही विशेषताहरु परिवर्तन र मानक थिएनन्। पाँचौं आईफोन एक मूल स्मृति 16,32, 64 गिगाबाइट उत्पादन। मात्र अपवाद हुन सक्छ जो 16 वा 64 जीबी 5c थियो।
यस्तो समान फोन को लागत अविश्वसनीय भिन्न छन्। 18-20 हजार rubles को लागि हुन सक्छ पाँचौं मोडेल किन्न। तथापि, खरीदार लागि एस उपसर्ग भुक्तानी गर्नेछ। लागत 5s धेरै 30 को रूपमा हजार rubles छ।
निस्सन्देह, यो श्रेष्ठता markedly, तर निर्माता निश्चित लागत overestimated छ। खरीदार मात्र होइन विभिन्न स्मृति क्षमता संग यन्त्रहरू बीच, हतार छ, तर पनि उपकरण एक श्रृंखला चयन गर्न।
को iPhone55s फरक छ के बाहिर आंकडा गर्न गाह्रो छैन। Fotoharakteristiki, सानातिना परिवर्तन र थपिएको भर्नु पक्कै ध्यान आकर्षित। निस्सन्देह, 5s मानक पाँच आधारमा गरे, तर उहाँले पनि सबैभन्दा अनुभवी प्रयोगकर्ता चकित कुरा छ।
"सैमसंग 7262": विशेषताहरु, फोटो, मूल्य सेटिङ
मा 4S iPhone ध्वनि गायब भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व भन्ने समस्या। आफ्नो निर्णय।
स्मार्टफोन "सैमसंग ग्यालेक्सी कोरि2Duos": समीक्षा र प्रतिक्रिया
को पानासोनिक LUMIX DMC TZ35 पूर्ण विवरण
कसरी "आईफोन" गर्न अडियोबुकहरू डाउनलोड गर्न: बयान
Nokia 1030 स्मार्टफोन: एक समीक्षा, विनिर्देशों, वर्णन र समीक्षा
समीक्षा र सुझाव: बिना मध्यस्थ "Get.Taksi" जडान
मास्को मा कन्सर्ट हल। ठेगाना, पोस्टर, मूल्य
पोस्टकार्ड, ग्लास र तकिये मा टालो सजावट 'ड्रैगन' सबैतिर
नाम को उपचार के हो र त्यो अध्ययन छ
Teething बेला बच्चा को तापमान। के गर्न कसरी crumbs मदत गर्न?
फोन "फिलिप्स V377": विनिर्देशों, समीक्षा
Vyacheslav Lysakov, एक राज्य Duma उप: जीवनी, राजनीतिक गतिविधि र परिवार
लाइक को "कुलपति" धेरै कसरी हासिल गर्न: सामाजिक सञ्जाल को रहस्य
अर्डर मा "Varfeyse" मा स्तर (फोटो)
राशि अनुकूलता: मिथुन-मानिस, महिला-मकर